Dhimashada ay sababto xanuunka duumada oo weli ka jirta dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika – Radio Daljir
Agoosto 20, 2013 3:23 b 0
Nairobi, August 20, 2013 – Aduunka oo idil ayaa maanta laga xusayaa maalinta duumada aduunka, kadib 1897 wakhtigaas oo dhakhtar u dhashay Britian uu ogaaday in kaneecada dhediga ah ay gudbiso duumada.
War-bixinada la xiriira khatarta duumada aduunka ayaa sheegaya in xanuunkaasi uu ku badan yahay dalalka Afrika, waxaa inta badan la sheegaa in cudurka duumada uu aad uga jiro dalalka saboolka ah.
Xanuunka ka dhashay viruska ay keento kaneecada dhedig ayaa la sheegay in ay khatarta ugu badan ku hayso ilaa %90 boqolkiiba, ?dadka ku nool dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika.
War-bixinada la xiriira cudurka duumada ee dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika ayaa sheegaya in inta badan ay aad u haleesho caruurta iyo haweenka, khatarta duumada ayaa inta badan caruurta dalalkaas ay u geeryoodaan.
Caruurta iyo haweenka ila hadda ku geeryooda dalalka ka hooseeya saxaraha waa ay sii kordhayaan, waxayna war-bixinadu sheegayaan in ay maalinta kasta dad u dhintaan.